ဆီးခြိုရောဂါ အမွဈပွတျစတေဲ့ ဟငျးလာပါပွီ – Askstyle
ဆီးခြိုရောဂါ အမွဈပွတျစတေဲ့ ဟငျးလာပါပွီ
ဆီးခြို သှေးခြို ဖွဈလို့ အစားအသောကျရှောငျနရေတဲ့သူ …ရောဂါမတကျအောငျ ဆေးတှနေဲ့ ထိနျးနရေသူတှအေတှကျ တကယျ့ကို သတငျးကောငျလေးတဈပုဒျဖွဈပါတယျ….. ငါးရံ့နဲ့ ဆီးဖွူသီးသာ စားပေး လုံးဝအမွဈပွတျပြောကျတယျလို့ ဆိုပါတယျ…ဆေးနညျးကလညျး နက်ခတ်ထရောငျခွညျမဂ်ဂဇငျးပါ ဆေးနညျးလေးဖွဈပါတယျတဲ့…ပရိသတျကွီးတို့အတှကျ အသုံးလိုမယျ ထငျလို့ ပွနျလညျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော….
ဆီးဖွူသီး (၁၀)လုံးနှငျ့ငါးရံ့ (၁၀)ကပျြသား ရောခကျြစားပါ……(၃)ကွိမျမြှစားရုံဖွငျ့ ဆီးခြိုလကျတှေ့ သကျသာကွောငျးတှရှေိ့ရပါတယျ…..(၆)လခှဲလောကျ စှဲစားပါက အမွဈပွတျကွောငျး သတငျး ကောငျးပါး အပျပါသညျ….အထကျပါ ဓာတျစာစားနခြေိနျကာလအတှငျး၌ အခြိုရညျမြိုးစုံမြား….. အခြိုဓာတျပါရှိသော အစားအသောကျမြား . အထူးသဖွငျ့ သရကျသီးမှညျ့၊ ပိန်နဲသီး၊ ဒူးရငျး၊ရှောကျခြိုသီး၊ လိမ်မျောသီး၊ ကြှဲကောသီး၊ ကွကျမောကျသီးနှငျ့ ကောကျညှငျးမြားကို ရှောငျကွဉျရပါမညျ….ကဲ..ပရိသတျကွီးရေ…..အားလုံးပဲကနျြးမာသုခ တှနေဲ့ ပွညျ့စုံစဖေို့ ပွနျလညျမြှဝကေုသိုလျလုပျပါတယျနျော….. ပရိသတျကွီးတို့လညျး ဝဒေနာရှငျတှကေူညီနိုငျဖို့ မြှဝနေိုငျပါတယျနျော…
credit: နက်ခတ်ထရောငျခွညျမဂ်ဂဇငျး အမှတျ ၃၆၉( ဧပွီလ ၂၀၁၇), Photo- ရှညောသား
ဆီးချို သွေးချို ဖြစ်လို့ အစားအသောက်ရှောင်နေရတဲ့သူ …ရောဂါမတက်အောင် ဆေးတွေနဲ့ ထိန်းနေရသူတွေအတွက် တကယ့်ကို သတင်းကောင်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်….. ငါးရံ့နဲ့ ဆီးဖြူသီးသာ စားပေး လုံးဝအမြစ်ပြတ်ပျောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်…ဆေးနည်းကလည်း နက္ခတ္ထရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းပါ ဆေးနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့…ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် အသုံးလိုမယ် ထင်လို့ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်….
ဆီးဖြူသီး (၁၀)လုံးနှင့်ငါးရံ့ (၁၀)ကျပ်သား ရောချက်စားပါ……(၃)ကြိမ်မျှစားရုံဖြင့် ဆီးချိုလက်တွေ့ သက်သာကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်…..(၆)လခွဲလောက် စွဲစားပါက အမြစ်ပြတ်ကြောင်း သတင်း ကောင်းပါး အပ်ပါသည်….အထက်ပါ ဓာတ်စာစားနေချိန်ကာလအတွင်း၌ အချိုရည်မျိုးစုံများ….. အချိုဓာတ်ပါရှိသော အစားအသောက်များ . အထူးသဖြင့် သရက်သီးမှည့်၊ ပိန္နဲသီး၊ ဒူးရင်း၊ရှောက်ချိုသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ကျွဲကောသီး၊ ကြက်မောက်သီးနှင့် ကောက်ညှင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်….ကဲ..ပရိသတ်ကြီးရေ…..အားလုံးပဲကျန်းမာသုခ တွေနဲ့ ပြည့်စုံစေဖို့ ပြန်လည်မျှဝေကုသိုလ်လုပ်ပါတယ်နော်….. ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ဝေဒနာရှင်တွေကူညီနိုင်ဖို့ မျှဝေနိုင်ပါတယ်နော်…
credit: နက္ခတ္ထရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၃၆၉( ဧပြီလ ၂၀၁၇), Photo- ရွှေညာသား